Maxay daarantahay shaxda ay dheelayaan Boqorada Carbeed? Maxaase lagu haystaa Qatar? - somalilandlivemedia
15:13 10. June 2017
Wacanoo wanaagsan akhyaareey idil ahaantiinba meelkastoo kala joogtaan ilaahayna Bishaa barakaysanee Ramadaanka khayrkeeda ha ina siiyo, intaa ka dib waxaynu qormadan kooban ku eegi doonaa qalalaasaha ka aloosan bariga dhexe hada ee ku saabsiisan Wadamada Gacanka Carbeed.
Waxaynuna dul istaagidoonaa shaxda ay dheelayaan boqorada carbeed iyo waxay daarantahay, inagoo mid mid u dul istagi doonaa haday tahay boqorada iyo haday tahay saamaynteeda gobolka iyo saamaynta kalee ay ku yeelan karto gobolka Bariga dhexe iyo sidoo kale danaha ay ka kala yeelan karaan quwadaha waawayn iyo kuwa gobolkuba.
Xaqiiqooyin u gaara dalka Qatar.
adamada ugu yaryar aduunka, dal ahaan waxaa ku nool guud ahaan dad lagu qiyaaso 1,800,000 halmilyan iyo sideed boqolk oo kun waxaa muwaadinin ka ah 300,000 halka 1,500,000 ay yihiin dad dul saar ku ah oo arimo shaqo la xidhiida u jooga dalka.
Ka dhaqaale ahaan waa wadanka ay dadkiisu ugu dakhliga badan yihiin dunida xadi lagu qiyaaso 140,000 ayaa qofkiiba ku soo hagaagaaya sanadkii, dhinaca tacliin wanaaga dunida wuxuu kaga jiraa kaalinta 4aad wadamada Carbeedna kaalinta 1aad, xaga ladagaalanka musuqmaasuqa waa wadanka ugu yar musuqa wadamda carabeed sida ay haayada musuqa qiimaysa ee dunidoo dhan looga danbeeyo ku tilmaantay magaceedana la yidhaa (Tranparency International) . Runtii liiskoo dheer kama gayoon karno hadaynu is nidhaa taxa waxay wadamada kale ee carbeed kaga duwan tahay se wadankaasi siduu u yaryahay iyo kaalinta uu dunida ka ciyaaraa isma laha. 20% Gaasta dabiiciga ah ee aduunka isagay kaydkiisa ku jirtaa waana wadanka ugu badan ee soo saara Gaastaa dabiiciga ah, waxay leedahay Zaadka baan ee ugu wayn dunida carabta.
Siyaasadaha Qatar walaalaheed ku shuufeen.
Nolosha la isku dhaxlo.
Wadanka Qatar isagoo kala mida wax badan nidaamka maamul wadamada Khaliijka hadan waxay ku kala duwan yihiin siyaasadaha ay raacaan haday tahay siyaasada ku waajahan dunida Carbeed iyo haday tahay ta ku aadan dunida Muslimka ah iyo guud ahaanba aduunka. Hadaynu u nimaadno dhaqanka Carbeed wiilku wuxuu aabihii xukunka ka dhaxlaa markuu dhinto taasoo sababta inay isku dul gaboobaan aabaha iyo wiilkiisu siduu u sugaayo oo markaa uu dhaxlo aabihii isagoo aan waxba ka yarayn isna, se Qatar waa wadanka qudha ee Carbeed ee boqorkii wiilkiisa uga dagay isagoo kartidii iyo awoodiiba leh uu wax ku maamuli lahaa.
Wadankani wuxuu markii ugu horeysay xoreeyey cuquushii wadamada Carbeed, waxaanay Aljazeeri furtay 350 Milyan oo caraba cuquushoodii iyadoo fahansiisay shaxda dunida laga dheelaayo, waxay kaloo dunida gaadhsiisay fariita shucuubta Carbeed tabanayeen. Mar la waydiiyey Faisal Qasim oo ah wariyaha ugu caansan dunida Carabta kana hawl gala Aljazeera waxa ay Qatar carab ku soo kordhisay ? Wuxuu ku jawaabay waxaa amaan ugu filan Qatar Aljazeera.
Waxay Aljazeeri fahansiisay dadwaynaha Carbeed siyaasaduba waxay tahay, waxay meel fog gaadhsiisay fariinta kuwa dulman sida Falastiin,Afganistan,Ciraaq,Suuriya,Somaliya iyo sidoo kaleba cid kastoo ku dulman meelay joogto. Waxaa intaa ka daran inay ceebahoodii dibada soo dhigtay madaxda Carbeed sababtaas awgeed ayey dhamaan madaxda carbeed ula coloobeen cida marti galisay Aljazeera oo runti habka ay raacdaa ahaa mid ku cusub dunida Carabta.
Mawqifkii kacdoonadii dunida carabta.
Kacdoonadii dunida carabta ka dhacay waxay soo saareen wajiga dhabta ah ee boqorada Carabta waxaanay badi geeska ku dhufteen kacdoonadii shucuubta Carbeed ku rabeen inay heeryada Diktaatoorada iskaga tuuraan waayo waxay boqoradu u baqeen xukunkooda taasina waxay sababtay in wadanka Carab ugu muhiimsan ee Masar madaxwaynaheeda sida tooska loo soo doortay ay kasoo hor jeestaan xadi dhaqaale oo badana ku bixiyaan sidii loo ridi lahaa iyagoo ku taageeray Sisi afgambigii uu sharciga ku laabay.
Waxay se Qatar qaadatay wado ka duwan taas oo ah inay taageerto rabitaanka shucuubta carbeed iyo muhiimada in isbadal ka dhaco dunida carbeed taasna waxaa la odhan karaa waa khilaafka ugu wayn ee ay isku khilaafeen saaxiibadeeda ay gacanka wada dagaan.waxayna siyaasadeedaa u adeegsatay warbaahinta guri kasta oo carbeed gasha ee Aljazeera.
sheekh Qardaawi iyo culimada islaamka
Qatar waxay hoy u tahay badi culimada waawayn ee islaamka laga yaqaan sida Sheekh Yusuf Al-Qardaawi iyo kooxdiisa ah haayada ugu saraysa ee culimada islaamka, sheekhaas oo aan la gaban runta badina dhaliila mawaaqifta carabta sidoo kalena ah Tiir ka mida tiirarka fikirka casriga ah ee Islaamiyiinta maanta, waxaa sheekhan hore looga mamnuucay meelo badan oo ka mida khaliijka sida Emirates iyo kuwo kaleba.
Waxay intaa ku sii darsatay Qatar iyadoo u fidisay gogol xubno badan oo Ikhwaanul muslimiin iyo gaar ahaan mufakiriinta ugu badan ee ku dooda isla jaanqaadka Islaamka iyo Siyaasada. Waxay suaashu tahay se maxay tahay dhibka ay ikhwaanku ku hayaan boqorada Carbeed ? jawaabta oo koobani waxay tahay wax kale maaha ee waa urur u socda inuu kursiga ku fadhiisto saamayn badan ku leh dunida Carbeed, waxa uu aaminsanyahayna tahay habka Dimuquraadiyada iyo in qori isku dhiib noqdo maamulka wadamada islaamku waana halka halistu ku jirto sidoo kale waxay aaminsanyihiin in islaamka lagu dabaqo nolosha,taas´ oo Gaalo iyo nimanka Cilmaaniyiinta ah ee badi ka taliya dunida carabta iyo Reergalbeedba aanay rabin.
Waa ururka ugu muhiimsan islaamiyiinta wadanka Falastiin waana urur ay is hayaan xarakada Tatax ee uu madaxwayne Cabaas hogaamiyo mar ay labadoodu doorasho xora wada galeena waakuwii ku guulaystay hase ahaatee guusha xamaas ay gaadhay waagaas ma ay ahayn mid raali galisay Reergalbeed iyo Israiilba sidaas darteed lama ictiraafin waxaana lagala horyimi diidmo qayaxan.
Waxay suaashu tahay markana Xamaas waxay is hayaan Israaiil ee maxay Carab u gaysatay Xamaas ? Jawaabta oo koobani waxay tahay wixii ay Israiil raali ka tahay ayuunbaanu raali ka nahay waayo Big Brother oo Maraykan ah ayaa naga danbeeya. Halkaa markay
marayso waxay Qatar taageertay Xamaas iyadoon dhag jalaq u siin Maraykan , Israiilba iyo boqorada carbeedba waayo waxay Xamaas ku taagnayd xaqii qori caaradiina kumay iman xukunka waxay udoodaana waa qadiyada shacabka Filistiin ee dulman.
Mushkilada hada iyo waxay salka ku hayso.
Waxan maanta ka taagan bariga dhexe waxay salka ku haysaa booqashadii madaxweyne Trump ee uu dhawaan ku tegay dalka Sacuudiga. Bale sida uu barihiisa bulshada ku sheegay markii Qatar ay xidhiidhka u jareen wadamo dhawri wuxuu yidhi Trump ( durba waxay u muuqataa in hadalkii aan ka jeediyey Shirkii wadamada Islaamku inuu midho dhalay ) taas oo loo fahmay inay jireen waxay ka wada hadleen isaga iyo boqorada carbeed. waana xaqiqo jirta hadaanu Maraykan fasaxsiinin inaanay arinkan ku dhaqaaqeen.
Raali ahaanshiiyihii ay ka haleen madaxweyna Trump Iran kuwmay waajihin ee iyagiibaa iskula soo noqday gudahooda taas oo khatarba galin karta jiritaankii ururkii ay ku midaysnayeen ee GCC. Waxay Iran tahay mushkilada ugu wayn ee Bariga dhexe hada qalaalasaha ka wada wadamo badan taas oo fitno kala dhex dhigtay Ciraaq,Suuriya,Lubnaan iyo Yamanba sidaas darteed hadii goaankani yahay ajande ka soo baxay iyaga waxay awooda saari lahaayeen Iran iyo sidii ay ula tacaali lahaayeen se baruurtu Orgiga ka wayn oo waa lagu adeeganayaa boqorada Carbeed.
Wajiyada ay yeelatay hada iyo saamaynta gobolka ay ku yeelan karto.
Sida ay u muuqato wadamadii goaanka ka qaatay Qatar ismay lahayn sidanay wax u dhacayaan oo waxaad moodaa inay xisaab qaldan isku dhufteen (miscaculation) iyagoon dhanka kalena xisaabin (risk calculation) waxaanay xisaabsadeen inay tahay wadan yar oo aan wadamada gobolka iyo duniduba sidaa ugu soo gurmanayn sidaa darteed markaydin wax kasta ka jartaan way idiin toobad keeni. Hase ahaatee waxaa dhacay wixi wax ka duwan.
Waxa 24 saacadood gudahood goaan ku soo saaray dalka Turkiga oo sheegay inuu ciidamo u diraayo dalkaas isagoo camiraayana qaacidada milatery ee laga siiyey halkaas, waxaa sidoo kale labada wadan ka dhaxeeya heshiis difaac wada jira oo ay galeen 25/12/2001 .Waxaa kale markiiba ka soo jawaabtay Iran oo baahidii cunada markiiba u furtay dekedaheeda halka Turkiguna sidoo kale tijaartii cunadu u jeesteen suuqan cusub ee usoo furmay.
Dhanka siyaasada marka la eego maalintii arbacadii ina dhaaftay waxay Iran Turkiga u dirtay wasiirkeeda arimaha dibada oo arinkan kala hadlaayey Turkida taas oo saacado gudahood ku badashay shaxdii Maraykan iyo wadamadii khaliijkuna arkeen khatarta ay leedahay haday labadaa wadan gacan saar yeeshaan sidoo kale waxay khatar galinaysaa xulafaysigii Bariga dhexe oo markii hore Sucuudiga iyo Turkigay ahayd se arintan ay isku khilaafsan yihiin Turkiga iyo Sucuudigu waxay furaysaa khilaaf hor leh iyagoo markii horeba Turkiga iyo Sucuudigu isku khilaafsanaayeen arimaha gobolka sida Afgambigii Masar.
Hadal iyo dhamaan Qatar aad bay muhiim ugu tahay Turkiga waayo waa meesha labaad ee Islaamiyiinta dunida oo dhami saamaynta ku leeyihiin martigalisa hadhka ay hadhsadaana u ah waana wadan dhaqaale leh sidoo kalena ay isku aragti ka yihiin dhamaan dhacdooyinka ka aloosan Mandiqada sidaas darteed ayuu Turkigu nafta u dul dhigayaa Qatar halka ay Irana dani ugu jirto arinkaas inay saaxiib la noqoto Turkiga arintan awgeed.
Gebabegada sheekada ilaa hada wax waan waani ma muuqato Qatar isma dhiibin arintiina may u dhicin siday moodayeen xalkeeduna wuxuu ku xidhan yahay shaxda ay dheelaan wadamada gobolka iyo quwadaha waawayni inkastoo marka ay masaalixda wadamada gobolka iyo quwadaha waawayni isjiidhaan ay adkaato sida xal waara loo gaadho waxa inooga markhaatiya Suuriya iyo siday ku bilaabantay, Liibiya iyo Yemenba balse arinka Qatar waa suaal maalmaha soo socdaa jawaabteeda inoo soo sidaan.
Halkan ka Akhriso Sida ay ula kala Safteen Labada Garab, Somalidu– Maqfuqfka Xukuumada Somalia halkan ka akhirso Sidoo kale Halkan ka Dheeho Xukuumada Somaliland oo iyana Lasafatay, Xulafada Sucuudiga Jabuuti ayaa iyana Sucuudiga Lasafatay
Daawo Barnaamijka Shaqada iyo Shaqalaha Qaybii Labaad ee Shaqada.
Guddoomiyaha Komishanka Degmada Hargeysa Oo Baaq U Diray Bulshada Reer Hargeysa Video
Gudoomiyaha Garabka dhalinyarada wadani oo dhulka la galay Gudomiye Ramaax
Reer Berbera Oo Soo Dhaweyn Ka Turjumeysa Dareenkooda Isbedel Doon Maanta Ku Qaabilay Waftigii Musharax Cabdiraxmaan Ciro + Sawirro
Suldaanka Guud ee OROMADDA oo la Filayo inuu Somaliland soo Yimaado
Newer PostXukuumadda Somaliland Oo Taageertay Sucuudiga & Xuluufadiisa Iyo Golaha Wasiirada Oo Go’aamo Ka Soo Saaray
Older Post Nuxurka Kullan Qasriga Madaxtooyada Ku Dhexmaray Siilaanyo Iyo Culimada Dalka Video